Oromiyaaf Gaarummaa Amantalaa | freedomfororomo
Adooleessa 02, 2013 | Ibsaa Guutama irraa
Kanaaf kanneen hamaa nuu hawwanii fi gargar nu qooduu fedhaniif gurra qeensuu hin qabnu. Deemsa yeroo keessa kan nuu tolutt akka baanu mamii hin qabnu. Yoo iyyaafataa deemnuu fi naannaa keenya qeeqaan laallutt kaanu, caalaatt of baruu fi addunyaa keessa jirruu hubachuu eegaluun, nafii fi jaalala lammii keenya Oromoo, waliin biyya waloo fi kaayyoo bilisummaa tokko qabnuuf waan baafnuuf akka ofirraa qabnu qayyabachuu eegalla. Achumaan annisaan Oromummaa gadifageenyaan nuugalutt ka’a.
Ammaaf, Oromiyaan biyya amantee hedduutii. Tokkummaa see eeggattee jiraachuuf amantalummaa guddifachuu malee filmaata biraa kan qabdu hin fakkaatu. Kanatt haansinee sun mal jechuu akka ta’ee fi anjaa Oromiyaaf qabaachuu danda’u ilaaluu haa yaallu. Amantalummaa yeroo jennu hala amanteen dhimma gara bulchaa, barumsa ambaa yk dhimma malbulchaa biraa ilaalu keessa hin galle jechuufi. Akkasuma finnaanis dhimma amantee ilaalu keessa galuu hin qabu jechuu dha. Gabaabaatt amanteen kan abbaa, finnaan kan walii tahuu fudhachuu jechuu dha. Sun akeeka, garagarummaa amanteen jiru utuu hin laalin, biyyattiin kan namoota finnicha jala jiranii hundaati jedhu irrati bu’uurfama. Tokko tokkoon namaa, mirga bilisummaa yaadaa, kan seexaa saa qofaan masagamu qaba jechuu dha. Yoo amanteen tokko fo’amee akka amantee finnaa ta’u godhamee, finnichi jara hafan hunda irratt dhiibbaa tolaa hin taane gochuu danda’a. Sunimmoo mirgoota nambiyyaan qabu hunda tuqa. Bara nugusa nugusoota Itiyoophiyaa, finnaa fi amanteen Tawaahidoo gargar hin jiran turan. Finnaan hirree yeroo gumaachu amanteen ilaalcha masagaa kenna ture. Kanaaf amantooti hafan baras hangam akka gadi ilaalamaniif itt cobamaa ture ni yaadatamaa.
Olaantummaa amantee tokkoon amantoota biraa irratt lamuu akka roorrifamu kan barbaadu jira hin fakkaatu. Tajaajila saafi amanteen Tawaahidoon mootota waliin angoo fi qabeenya hirmataa jiraate. Nugusicha duuba amantee fi galmastaanni (church) seeraan gargar bahan jedhame. Qabeenyi saas akkuma qabeenya dhaabota biraa kan finnaa ta’e. Keessaayyuu finnaan dhimma galmastaanaa keessa galuu hin dhiisne. Muudammii fi ari’amuun matoota amantichaa sanaaf ragaa dha. Sun mirga bilisummaa yaadaa tuquu jechuu dha. mirga sana irra ejjennaan amantalummaan gar tokkoon haalame jechuu dha. Dursee Waldaa Waaqeffannaa cufee. Amma amantee Islaamaa keessa harka galfachuun mormii kanaa dura argamee hin beekne kaasee jira. Abbaan hirree eenyuunu kophaatt hin dhiisu. Itophistooti qasaawota ofiin jedhan hedduun jecha “Laaqii Kiristinaa garba awaamaa fi Islaamaa keessaa” jedhu qaabachuutt kan ka’an fakkaata. Rakkinni saanii seenaa fi demokrasii wal fudhachiisuu dadhabuu dha. Kaan ammayyuu amantee Tawaahidoo, faajjii halluu sadanii fi finnaa Habashaa ulfoo ta’uutt fudhatu. Kanaaf abboolii saanii irra ilaalcha addaa guddifachuu hin dandeenye. Habashamitii hundi wanti habashaaf “ulfoon” isaaniif mallattoo kufaatii saanii kan Habashaaan qabachuuf fudhatee itt duule ta’uu hin irraanfatani. Yeroo amma yaada dulloomaa fulduratt dhiibuun kaarra gidduu saanii jiru dhiphisuu irra kan baldhisuu ta’a. Moototi fi galmistanni qoteebulaa firoota saanii ta’an hacuucaa fi qorqaa jiraatani. Booda biyyoota kibba saanii jiran koloneeffatanii gara laafina tokko malee waliin saamaa turani.
Warraaqsa 1974 duuba finnaa amantalaan uumamuun hedduu abdachiisee ture. Galmistannis miiltoo finnaa tahuun hafee gumaacha amantoota saan jiraachuutt ka’uutu himama. Duratt gumaacha amantoota biraan jiraata akka ture kan irraanfatamu miti.Rimsammi amantalummaa ammayyaa tarii biyyoota Kiristinnaa Dhihaatiin eegalame ta’a. Akka fakaatutt sana kan maddisiisee serri ayyaanaa gaaffilee guddina beekumsaa fi teknoloojiin ka’an deebisuuf hanqina qabaachuu dha. Yeroo waa’ee amantalummaa dubbannu kan nammuu beekuu qabu amantalummaan amantee dhabuu yk waqanqabnee jechuu akka hin taane. Nambiyyooti hundii fi bulchooti saanii bilisummaa yaadaa fi mirga akka fedhaniti uumaa saaniif hoo qubaa galchu qabu. Seerri finnaa faanfana malee sana kabachiisa. Sun kan danda’amu yoo finnaan addati amantee tokko hin mararfanne. Finnaa demokraatawaan amantee kamuu galmeessuu malee hayyama kennuu tahitaa hin qabu. Sana jechuun amantee finnaa kan jedhamu hin jiru, finnaanis amantee qabachuu hin danda’uu jechuu dha. Biyya amante hedduu qabu keessatt amanteen malbulchaa keessa seenuu hin qabu; garuu abba tokkootaaf amanteen kabachiifamuu qaba. Bilisummaan waldaan qixaawuun, mirga murnoota hundaa kan murnoota amantees dabalatuu.
← ESAT : Insight interview with Prof. John Markakis (Ethiopia)
Qabsoon Oromoo Tokko… Qabsaawonni isaa garuu adda kudha tokko! →